Kusagadzikana kwezvematongerwo enyika muSpain makore ekudyara mwaka uno wezhizha | Ehupfumi Zvemari
Kusagadzikana kwezvematongerwo enyika muSpain makore ekudyara mwaka uno wezhizha
Imwe yenyaya dzakaipisisa yemisika yemari yakaiswa muSpain pazvaive zvisingatarisirwe. Izvo ndezve kusagadzikana kwezvematongerwo enyika semhedzisiro yekushomeka kwehurumende yazvino yeSpain kuti irambe ichitungamira hupenyu hwenyika. Uine kufamba kwekushora padhuze nekona iyo iri kutyaira vatyairi kuenda kune mamwe epasi rese masitoko ekutsinhana kana kunyangwe zvimwe zviwanikwa zvemari. Kutya kwakaiswa zvakare pakati pevaSpain saver. Uye zvingave zvishoma sei, iwo makuru masheya indices aunganidza izvi musika unzwe.
Pamberi penyaya idzi, neChishanu chadarika mari dzekuSpain dzaive dzakaipisisa pane dzese dzakabatanidzwa mukondinendi yekare. Kusvika padanho rekusiiwa mune imwechete yekutengesa chikamu chinenge 2% mukotesheni yeIbex 35. Pamusoro pedzimwe nzvimbo uko mhinduro yanga isiri yakanyanya uye iko kwaive nekufambira mberi muDAX ine simba kubva kuGerman. Izvi zvinoratidza kuti ichokwadi chemuno, kunyange pasina mubvunzo kuti pakupedzisira inogona kupedzisira yashatisa mamwe masitoko eEuropean. Nekudzoreredza iyo Italy iri zvakare isiri kuwana nguva yakanaka yekudyara mumusika wemasheya uye nezvikonzero zvakafanana neyedu.
Muenzaniso wekunetsekana uku kune chikamu chevashambadziri vadiki nepakati inyaya yekuti kuchengetedzwa kwakachengetedzwa sekudzivirira kana kuchengetedza ndiyo yakanyanya kurangwa mazuva ano. Semuyenzaniso, Enagás, Gasi Natural kana Endesa pachayo izvo zvakadzikira pamusoro pevhareji yenyika, ndokuti, nekudonha kweanopfuura 3%. Kana zvirizvo zviri mamwe emakosheni akasimba eakaenzana emunyika. Asi chokwadi ndechekuti kutengesa kwakaiswa zvakanyanya pakutenga. Zvino mubvunzo ndewokuti kufamba uku kwakanangana here kana kuti kuchaenderera kwemazuva mashoma anotevera kana kunyangwe mavhiki.
1 Kusagadzikana munzvimbo dzekudyara
2 Yakakwirira njodzi njodzi
3 Chikamu chebhengi chakanyanya kubatwa
4 Dzimwe nzira kune aya mamiriro
5 Mirira kutenga zvakachipa
Kusagadzikana munzvimbo dzekudyara
Chero zvazvingaitika, iwo maonero haana kunaka kune vanoita mari. Mupfungwa iyi, iyo inosarudzika index yeSpanish stock market yakagogodza pasi zvakakosha zvakakosha zvinotsigira zvakanyanya shanduko yayo kubva panguva dzino chaidzo. Nekuti zvirizvo, iyo Ibex 35 yakavhara uno Muvhuro nekudonha kwe0,7% kusvika zvishoma pazasi pe9.700 pfungwa. Kwete chete semhedzisiro yekusagadzikana kwezvematongerwo enyika munyika medu. Kana ikasatsigirwawo nemamiriro ezvematongerwo enyika muItari, mushure meMutungamiriri weRepublic, Sergio Mattarella, atsigira danho reHurumende yeNorth League uye neChishanu Star Movement, nekubatanidza Gurukota reEurosceptic reEconomy.
Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti mhedzisiro yekuumbwa kwehurumende munyika mbiri idzi chakavanzika panguva ino. Kusvika padanho rekuti chikamu chakanaka chevanoongorora zvemari vanofunga icho bhegi racho rinenge rakanganisika zvakajeka. Zvirinani munguva pfupi. Naizvozvo, zvese zvinoratidza kuti zhizha rinopisa rinogona kusangana mune idzi dzakakosha nzvimbo dzenzvimbo yeyuro. Pazvinenge zvichikosha kuita sarudzo dzakasimba kuchengetedza nhaka yedu pachedu neyemhuri. Kuti usawire mune dzimwe njodzi dzisingabatsiri dzinogona kuita kuti urasikirwe nemaeuro mazhinji mumazuva ano akaoma.
Yakakwirira njodzi njodzi
Chimwe chinhu chinokanganisa kusagadzikana kwezvematongerwo enyika muSpain mari yekutanga. Kusvika padanho rekuti tidzokere kunzira dzedu dzekare mushure menguva yekudzikama kukuru uye izvo zvakabatsira shanduko yemusika weSpain wemusika mune yazvino hupfumi mamiriro. Nekuti ichokwadi kuti kune dzimwe njodzi dzakawanda kupfuura nakare uye ipfungwa iri kuzara pakati pevashambadzi veSpanish. Nekuti pasina kusvika pamusika wekutengesaIchokwadi kuti kuora moyo kwakagara muchikamu chakakosha chevanhu venyika.
Chero zvazvingaitika, zvinofanirwa kurangarirwa kuti iyo yekuSpain yengozi premium yakapfura kusvika ku118,6 hwaro hwenongedzo pamwe nekuwedzera kweanopfuura 11%. Matanho anga asati aonekwa mumwedzi ichangopfuura kana kunyangwe makore. Kunyangwe zvakaipisisa ari iwo matanho anopiwa neiyo Italian premium iyo yakamira pane makumi maviri nematanhatu hwaro poindi uye iyo yechiPutukezi pamakumi manomwe emapoinzi. Muzviitiko zvese, maitiro akajairika mumisika yezvemari ndeyekuti chikwereti chinopararira chenyika dzeEuropean chiri kuwedzera nekuremekedza chisungo cheGerman chemakore gumi. Zvirinani kuzivikanwa sebund, inova ndiyo irikuita senzvimbo yekuvanda kubva pakuyerera kwemari yevatengesi vepasirese. Mamiriro ezvinhu akaomarara ayo ari kukuvadza vatengesi izvozvi.
Chikamu chebhengi chakanyanya kubatwa
Pane chinhu chimwe chakajeka uye ndechekuti kufamba uku kuri kukuvadza masheya ese uye zvikamu zveyeti. Iko mabhanga makuru ari kusiya mamirioni ema euro, senge mune chaiwo mamiriro e Banco Santander uye BBVA. Asi zvakare mune dzimwe nhengo dzakakodzera dzeiyi stock index, ine kusimba kwakanyanya kuderera muTelefonica, Iberdrola kana Repsol. Panguva ino, zvinogona kutaurwa kuti musika wekuSpain wemusika ndeimwe yeakaipisisa mukondinendi yekare, ine zvakakanganisika zvikuru zvine chekuita nemamwe misika yemari. Ichi ndicho chimwe chezviratidzo zvaari kutitumira gore rino uye zvirokwazvo hazvina kunaka.
Imwe yemafambiro ari kugadzirwa mazuva ano ndeyekuti mumusika wezvigadzirwa, mitengo yemafuta inoramba ichiderera. Iko, Brent, bhenji mu Old Continent, yakawa 1,5% kusvika $ 75,27, nepo West Texas yakadonha 2% kusvika $ 66,47 pabhariri. Kunyangwe kune imwe nhanho idzi nhau dzinogona kuve nemhedzisiro yakanaka pamisika yemasikirwo akaenzana. Mushure mekutengwa pamutengo pamusoro pe $ 80 dhiramu nekugadzira kumwe kutya mukati mevatengesi vadiki nepakati.
Dzimwe nzira kune aya mamiriro
Ehezve, kusagadzikana kwezvematongerwo enyika muSpain kunoreva kuti iwe unofanirwa kugadzirisa yako portfolio kuti uchengete zvaunofarira zvine chekuita nenyika yemari. Kana pamwe hauna sarudzo asi vhara nzvimbo uye zorora kwemwedzi mishoma kudzamara hupenyu hwematongerwo enyika hwanyarara. Uye zvakare, iri zano raizokubatsira iwe kutsvaga mhando nyowani dzekudyara. Chero zvazvingaitika, zviri pamusoro pekudzikama kuti unakirwe nezororo rako rakakodzera. Nekuti zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti mwedzi iyi ichave ichanyanya kuputika kubva kune yekudyara nzvimbo yekutarisa.
Kune rimwe divi, kusagadzikana kwezvematongerwo enyika muSpain, asiwo muItari, pamwe nekunzwa kwesimba rakakura mukutenderera muUS, kuri kukonzera kutenga kukuru kwezvinhu zveAmerica uchienzaniswa neveEuropean, sezvakaratidzwa neBankinter mishumo. Kusvika padanho rekuti iyi inogona kunge iri imwe yesarudzo dzaunogona kutora mukana kubva ikozvino. Zvimwe kuburikidza nekutenga nguva kwemari yeAmerica kana, zvinopesana, nekuenda kumisika yemari munzvimbo ino yenzvimbo. Kunyangwe isiri basa risina njodzi, sezvazviri zvine musoro kuti unzwisise.
Mirira kutenga zvakachipa
Chimwe chezviitiko zvinobatwa mazuva ano ndezvekuti gare gare uchave nemukana wekutenga migove yezvivakwa zvakanyorwa ne inonyanya kukwikwidzana mutengo. Uye pamwe kunyangwe iine simba rakanyanya rekuongorora zvakare kupfuura panguva ino chaiyo. Asi kiyi yekuita sarudzo yakasarudzika ichave nguva yekuzviita uye ndiro dambudziko guru raungave naro kuzadzisa zvinangwa zvako zvaunoda. Nekuti iwe unomhanya panjodzi yekuti nyika equities inogona kupinda yakadzika kudzika maitiro.
Chero zvazvingava, hapana chinotikoka kuti tivhure zvinzvimbo mazuva ano uye chinhu chine musoro kuita kumirira uye kuona kuti misika yezvemari yakasiyana siyana inoshanduka sei. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri mune iri nani mamiriro ekuita sarudzo ine chinangwa kuitira kuti kuchengetedza kwako kubatsire. Nekuti ikozvino musika wemari uri kuve wakaomesesa kududzira. Hazvishamise kuti kune makore mazhinji umo musika wemasheya uri kuwedzera uye chero nguva inogona kupedza maitiro aya. Naizvozvo, chenjera kwazvo mumafambiro auchazotora kubva ikozvino.
Chekupedzisira, hazvigone kutongwa kunze kuti zvinhu hazviende kune zvisina kukodzera zvakanyanya uye kuti maitiro epakutanga emisika yemari anokunda zvekare. Chero zvazvingava, pane chinhu chimwe chechokwadi uye ndiko kuti kusagadzikana kuchave kuripo mumutengo wezvichengetedzwa zvakabatanidzwa muIbex 35. Uye ichi chinhu chaunogona kubatsirwa nacho kana ukasarudza chakakodzera chemari midziyo. . Semuenzaniso, kuburikidza nehomwe yekudyara yeaya maitiro. Kana kunyangwe kuburikidza neaya anonzi ekuchinjana-akatengesa mari anozivikanwa zvirinani se ETFs.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Kusagadzikana kwezvematongerwo enyika muSpain makore ekudyara mwaka uno wezhizha
Dudzira uye unzwisise iyo Laffer curve
Ungazvidzivirire sei kusagadzikana kwemisika yemari?